မကွေးမြို့တွင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့် ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ် မဆောင်းဘဲ ဆိုင်ကယ်စီးနင်းသူ အေ? - Yangon Media Group
မကွေးမြို့တွင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့် ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ် မဆောင်းဘဲ ဆိုင်ကယ်စီးနင်းသူ အေ?
မကွေး၊ မတ် ၃
မကွေးမြို့တွင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နှင့် ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်မဆောင်းဘဲ ဆိုင်ကယ်စီးနင်းသူများအား အရေးယူမှုများ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေရာ တစ်ရက်ကို ဦးရေ ၃ဝ ခန့်ရှိကြောင်း မကွေးမြို့ အမှတ်(၁၅)ယာဉ်ထိန်း ရဲတပ်ဖွဲ့စုမှသိရသည်။ ယင်းသို့ ဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ရန် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်ကတည်းက ပညာပေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်မှစ၍ ဌာနဆိုင်ရာပူးပေါင်းအဖွဲ့များဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုများကို ပြုလုပ် ခြင်းဖြစ်သည်။
”စစ်ဆေးလို့ သတ်မှတ်စည်း ကမ်းလိုက်နာခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရင် ပထမဆုံးရဲစခန်းကို ပို့ပါတယ်။ စခန်းကတစ်ဆင့် တရားရုံးကိုပို့ပါတယ်။ တရားရုံးမှာ ဒဏ်ငွေဆောင် ပြီးရင်တော့ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေကို ပြန်ပေးပါတယ်။ နတ်မောက်ပွိုင့်၊ ပြည်တော်သာ ပွိုင့်၊ လမ်းငါးသွယ်နေရာတွေမှာ ပုံမှန်စစ်ဆေးနေပြီးတော့ တစ်ရက်ကို အနည်းဆုံးဦးရေ ၃ဝ လောက်အရေးယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တရားရုံးရောက်လို့ လိုင်စင်လုံး လုံးမရှိတာဆိုရင် ဒဏ်ငွေကျပ် ငါးသောင်း၊ လိုင်စင်ရှိပြီး အိမ်မှာ မေ့ကျန်နေခဲ့တာကိုပြနိုင်ရင် ဒဏ် ငွေကျပ်သုံးသောင်းဒဏ်ရိုက်ပါ တယ်”ဟု အမှတ်(၁၅)ယာဉ်ထိန်း ရဲတပ်ဖွဲ့စု၊ တပ်ဖွဲ့မှူးစု ဒုတိယရဲ မှူးထွန်းလှအောင်ကပြောသည်။
ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုများအ ဖြစ် လတ်တလောတွင် မော်တော် ယာဉ်လိုင်စင်လက်ဝယ်မရှိဘဲ ယာဉ်မောင်းနှင်ခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်စီး ဦးထုပ်မဆောင်းခြင်း၊ မေးသိုင်း ကြိုးမတပ်ခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်နောက် ကြည့်မှန်မပါခြင်း၊ အိတ်ဇောစက် သံဆူညံစွာ မောင်းနှင်ခြင်းနှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မရှိခြင်း၊ လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းစသည့် ပြစ်မှုများကို အရေးယူဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။ မြို့နယ်များတွင် လူဦးရေ ၃ဝ ခန့်စုစည်းပေးနိုင်ပါက နေ ထိုင်ရာမြို့နယ်ဒေသအရောက် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြား ရေးမှူးဦးစီးဌာနမှ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များ လုပ်ဆောင်ပေးနေ ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ သိရသည်။
ကျုံးပတ်လည် သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်များ ဆောက်လုပ်ခွင့်ကို အိတ်ဖွင့်လေလံစနစ်ဖြင့် ချထားပေးကာ ယာဉ်ကြောပ?